Cayayaanka, sida noolaha kale, waxay inta badan saameynayaan ma aha oo kaliya cudurada bakteeriyada, laakiin sidoo kale cayayaanka ka sii daraya caafimaadka iyo kordhinta dhimashada. Maanta waxaan ka hadli doonaa waxa qolka kuleylku yahay iyo sida ay u hagaajinayso caafimaadka cayayaanka. Aynu ka hadalno habka shinnida oo kuu sheegi doona sida loo abuuro unug guriga.
Sida loo sameeyo dalool ama daloolo ee rugta shinnida leh gacmahaaga
Waxqabadka muhiimka ah ee deegaanada shinni waxay ku xiran tahay tirada, qaabka iyo cabbirka rugta ee finan. Ugu horreyntii waxay ku saabsan tahay hawo hawo, diyaarinta iyo jiilaalka cayayaanka. Maxay tahay inay noqoto meesha ugu fiican ee laga helo rugta, sida loo dhiso daloolka naftaada iyo inta ay u baahan yihiin samaynta ururinta malab-firfircoon - waxaan ka sheekeyn doonaa arrimahan dambe ee maqaalkan.
Haddii aad rabto inaad kordho tirada qoysaska ee ku yaala astaamahaaga, dabin duufaan leh ayaa ah hab sahlan oo aan qaali ahayn si loo sameeyo. Waxaad u baahan tahay oo kaliya qoryo yar yar iyo xayawaan, afar ama shan muraayad laga soo bilaabo rugta iyo waqti yar. Waxa ay qaadato Beekeeping waxay ku bilaabataa beeska. Xiddig kasta oo jecel ganacsigiisa wuxuu rabaa in beeshiisa ay noqoto mid caafimaad qabta, firfircoonna u keensato malab badan.
Beehive ee godka: sida sidee shinni ku noolaan karaa oo ay ku noqon karaan guri-guri?
Waxaan u maleyneynaa in "boorashadu" yihiin guryo yaryar oo shinni ah oo la dhisay iyadoo la daryeelayo beera. Si kastaba ha ahaatee, dabiiciga ah, cayayaanka shaqeynaya ee adag waxay dhistaan ​​xoqin xagga geedaha, geedaha dillaaca iyo laanta. Qofku waxba kuma laha inuu sameeyo samaynta rugta noocan oo kale ah. Wild Hive Wild Hive waa habitat dabiiciga ah ee bees duurjoogta.
Sida looga fogaado dhibaatooyinka inta lagu jiro gaadiidka shinnida
Hijradu waa habka loo qaadayo shinnida si loo hubiyo in miraha wanaagsan ee goosashada oo idil inta lagu jiro muddada xilliga xiga. Waxay ku qaataan, inta badan, goobaha buuraha, halkaas oo dhirta malab badan oo kala duwan koraan. Waxaa haboon in la qaato nidaamkan si dhab ah isla markaana u sii diyaar garoobo, madaama guulaha xilli-ciyaareedku ku xiran yahay.
Qodobka ugu muhiimsan ee tiknoolajiyada daryeelka ee bees sida waafaqsan habka Tsebro
Beekeeping waa saynis qallafsan oo ay ka mid yihiin aqoonta iyo farsamada gacanta ee muhiimka ah. Kaliya dadka bukaanka ah iyo kuwa dhabta ah ee u gaarka ah ganacsigaan, waxay la socon karaan habab wax ku ool ah iyo sannado badan oo tijaabo ah, waxay fahmeen nuxurkiisa. Vladimir Petrovich Tsebro ayaa iska leh kuwa ilaaliya cilmi-baadhistaan.
Sida loo diyaariyo shinni ah xilliga qaboobaha: dhismaha cayayaanka
All beekeepers ogaa in dayrta waa lagama maarmaan si loo diyaariyo apiary muddada qaboobaha iyo dhamaadka xilli la nidaamka khasab ah - abuuritaanka bees 'hoyga jiilaalka. Waxay lagama maarmaan u tahay cayayaanka si guul leh jiilaalka meel bannaan oo deggan. Sida loo sameeyo, hoos ku akhri. Goorma Bilaabaa?
Beereyaal waaya-aragnimo ah oo geel ah ayaa u muuqda in ay wax ka qabtaan beeska muujiya heerarka sare ee malab-qaadista sanadka oo dhan. Tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahato inaad dooratid tarbiyo farabadan, oo ku wanaagsan taranka iyo adkeynta xaaladaha cimilada. Caleenta ah ee karis karnik si buuxda u waafaqsan shuruudahan, sidaas darteed waxaan ka sii falanqeyn doonaa sifooyinka iyo qaababka.
Maxaa loo baahan yahay iyo sida loo dhiso omshanik for bees
Arbacada qaboobaha waa waqtigii aad ka welweli laheyd. Qodobkani waxaan ka hadli doonaa sidii loo dhisi lahaa omshanik for bees leh gacmahaaga, garato sida loo wareejiyo cayayaanka si wintering, iyo sidoo kale ogaado marka ay ugu fiican tahay bilaabi isku diyaarinta qabow. Waa maxay tani? Beekeepers taqaan waxay si fiican u ogyihiin waxa Omshanik waa - qaab dhismeedka gaarka ah ee shinni jiilaalka, luqad fudud - marwo beerto.
Beekeeping ma aha arrin sahlan, taas oo aan lahayn aqoon iyo khibrad gaar ah waa wax aad u adag in lagu gaaro wax soo saar badan. Waxaa jira habab iyo farsamooyin kala duwan oo loogu talagalay in lagu beero cayayaankaas adag. Qaar ka mid ah ayaa loo tixgeliyaa in ay fudud yihiin, qaar kalena waxay u yihiin xirfadleyaal. Beeraley qibrad leh, shinni ayaa sii kordhaya caan ku ah qaabka reer galbeedka, taas oo ah, in badan oo finan ah.
Caleenta maqaarka: Waa maxay faa'iido leh iyo cudurada ay waxtar u leeyihiin, sida loo daweeyo
Bees waa cayayaanka dhabta ah, waxay keenaan faa'iidooyin badan inta lagu jiro noloshooda. Laga bilaabo xilliga dhalashada illaa dhimasho, shaqaalaha curyaanka ah ayaa abuuraya malab cajiib ah oo waxtarka leh, pollinates ubax waxayna u adeegi kartaa qof xitaa geerida kadib. Aynu ogaanno waxa shinni ah iyo sida loo isticmaalo.
Beelaha jiilaalka duurka
Mid ka mid ah waqtiyada muhiimka ah ee nolosha beeska gudaha waa ilaalinta "qaabka shaqada" xilliga qaboobaha - muddada uu qof kasta oo xirfadle ah ama qallafsani ah waa inuu la socdaa mas'uuliyad buuxda, isagoo baranaya oo si taxaddar leh dib u eegay dhammaan talooyinka la soo jeediyey ee cayayaanka kuleylka ee jiilaalka ee duurka.
Подверженность заболеваниям у пчёл так же высока, как и у других видов насекомых. При контакте с растениями при сборе пыльцы, с животными, людьми или насекомыми у "семьи" возрастает вероятность инфекционных заболеваний. Halis u ah jiritaanku waa cudur ku dhaca sarta, oo loo yaqaan cagaarsho cagaaran.